Ukungacwasi, ukungakhethi, nokungabandlululi kusemqoka
Ukuze kusungulwe umhlaba ongenalo ubandlululo, i-Airbnb.org imemezela kuwonk'uwonke izibophezelo ezilandelanayo zokuba negalelo ekungacwasini, ukungakhethi, nokungabandlululi.
I-Airbnb.org yamukela ababaleki base-Afghanistan
I-Airbnb.org izibophezela ekunikezeni izindawo zokuhlala zesikhashana kubabaleki abangu-20,000 base-Afghanistan emhlabeni jikelele. Imali exhasayo ivela kubanikeli abakhulu kanye ne-Airbnb. I-Airbnb.org isebenzelana ngokuseduze nama-ejensi nophathina bezofuduko ukuze isabele kulesi simo esishintsha masinyane.
I-Airbnb.org ifinyelela ingqophamlando yokuhlalisa izivakashi ezingu-100,000
Ngo-2017, iqembu elalizoba yi-Airbnb.org lafeza umgomo odinga isibindi wokunikeza izindawo zokuhlala zesikhashana ezivakashini ezingu-100,000 ngezikhathi zobunzima. Ngo-December 2021, i-Airbnb.org yenza okungaphezu kwalowo mgomo.
Ababaleki abangu-20,000 base-Afghanistan bathola izindawo zokuhlala zamahhala, zesikhashana
Ezinyangeni eziyisithupha ngemva kokumemezela ukuzibophezela kwayo ekunikezeni indawo yokuhlala yamahhala, yesikhashana ezifikini zase-Afghanistan, i-Airbnb.org ihlangabezane nomgomo wayo wokunikeza ababaleki abangu-20,000 izindawo zokuhlala. Ngenxa yomoya wokupha waBabungazi abathathe isinyathelo ngokunikeza amakhaya abo mahhala noma ngenani elinesaphulelo, i-Airbnb.org ikwazile ukunikeza izindawo zokuhlala kwezinye izifiki zase-Afghanistan ezingu-1,300.
I-Airbnb.org ayizamukeli izicelo zezimali okwamanje. Sizokwabelana ngemininingwane emayelana nomjikelezo ozayo wemali yeqolo ngokuqondile nezinhlangano ezingenzi inzuzo ezifanelekayo.